Alternatives TeamViewer tsara indrindra tokony hozahanao (2020) - Softwares
TeamViewer dia iray amin'ireo rindrambaiko birao lavitra lavitra indrindra manampy anao hifandray amin'ireo toeram-piasana marobe lavitra. Lasa izao ireo andro izay mampifandray amin'ny fitaovana lavitra rehetra izay tsy azo antoka sy matevina. Ity rindrambaiko ity dia ahafahanao miditra amin'ny solosaina lavitra.
Ny endri-javatra sy ny fiasa goavambe dia mamela anao hanatsara ny fahombiazan'ny fanaraha-maso amin'ny alàlan'ny fanafainganana ny fikirakirana sary. Izy io koa dia ahafahanao mandatsaka rakitra iray amin'ny solosaina lavitra mankany amin'ny solosaina hafa.
Na izany aza, na eo aza ny maha-zava-dehibe azy, ny lesoka lehibe indrindra an'ity rindrambaiko ity dia na eo aza ny fanavaozana ny kinova vaovao, dia mety ho lasa miadana ny rafitrao, ary lafo dia lafo ny volany kinova matihanina. Izany no antony mahatonga ny mpampiasa maro mitady alternativa TeamViewer amin'izao fotoana izao.
Maninona ianao no mila TeamViewer Alternatives?
Ho an'ny mpampiasa vaovao, ny rindrambaiko TeamViewer dia tsy mora ny manamboatra, izay vao mainka miteraka olana ara-piarovana maro. Ary raha tsy voalamina tsara ny rindrambaiko TeamViewer anao dia mety ho voan'ny risika ny rafitrao. Ary koa, raha te hampiasa ity rindrambaiko ity ianao ho an'ny tanjona ara-barotra, dia mila mamoaka vola be amin'izany ianao.
Eny, ireo antony ireo dia ampy hitadiavana safidy hafa ho an'ny TeamViewer. Ka noho izany, eto izahay dia namintina ireo safidy fito ambony an'ny TeamViewer, izay afaka miditra amin'ny solosaina lavitra.
Mitady Windows 10 Fihenan'ny mpianatra? Mialà amin'ny Fizarana Blog anay.
TeamViewer Alternatives (2020) - Top 7 tsara indrindra
Eto izahay dia nanombatombana vahaolana rindrambaiko fito samy hafa izay mety ho safidy matanjaka indrindra amin'ny TeamViewer. Ity rindrambaiko fanolo ity dia miasa ho fitaovana fitantanana lavitra indrindra ho an'ny mpanome tolotra rehetra. Noho izany, aza mandany fotoana be loatra, manohiza mamaky hahalala momba ireo safidy hafa ireo.
Ity no iray amin'ireo safidy tsara indrindra amin'ny TeamViewer satria afaka miditra haingana sy mivantana amin'ny alàlan'ny rafitra fiasa voalohany ianao, na takelaka, solosaina finday, finday avo lenta ary birao. Amin'ny alàlan'ny fidirana amin'ny mpijery HTML, ekipa misy olona mihoatra ny 25 afaka miditra amin'ny solosaina iray isaky ny mandeha.
Ankoatr'izay, ny admin dia afaka mamela ny mpampiasa haingana ary mifanakalo mora foana. Izy io koa dia misy fiasa mahavariana ho an'ny fivoriana an-tserasera milamina toy ny fifampiresahana an-tsoratra, firaketana, fiasan-tsipika fotsy, sns.Afaka miditra amin'ny demo mandritra ny 14 andro ilay olona; na izany aza, tsy maimaim-poana intsony io. Antenaina handoa manodidina ny 48 & isam-bolana ireo mpampiasa hanome lisansa amin'ireo mpampiasa dimy.
Dameware Remote Everywhere dia mpisolo toerana sarobidy iray hafa ho an'ny TeamViewer. Ity rindrambaiko ity dia manohana ny birao lavitra amin'ny solosaina macOS X, Windows, ary Linux. Ka raha ny fihevitray azy dia ity no vahaolana rindrambaiko fitantanana lavitra indrindra eto an-tsena.Ny rindrambaiko dia miasa tsara ho an'ny mpampiasa Windows satria mamela ny admin hampiditra eo noho eo ireo mpampiasa azy ao amin'ny lahatahiry mavitrika azy ireo ary hanome azy ireo fanampiana haingana hiditra amin'ireo fitaovana fitantanana.
Ity vahaolana rindrambaiko miorina amin'ny rahona ity dia manome mora ny fidirana sy hakingana ny mpampiasa avy amin'ny fitaovana SaaS. Na dia tsy safidy maimaimpoana ho an'ny TeamViewer aza dia afaka mandeha aminao ihany. Mandritra izany fotoana izany, azonao atao ihany koa ny mamerina ny solosaina lavitra, maka pikantsary iray tsindry iray ary miresaka amin'ny mpampiasa farany miaraka amin'ny fanampian'ity rindrambaiko ity.
Ianao ve mitady safidy TeamViewer misy fandoavam-bola miovaova? Raha izany dia tsindrio avy hatrany eo amin'ny Splashtop. Izy io dia vahaolana birao lavitra azo itokisana izay misy ho anao fa sady maimaim-poana no koa ny kinova aloa.Izy io dia tohanan'ny Linux, macOS X, Android, Windows, ary ny iOS fitaovana. Raha somary miahiahy momba ny olana ara-piarovana ianao dia hadinoy ny fanahianao satria manolotra ambaratonga enkripsi maromaro ho an'ny fiarovana tanteraka ny fitaovanao.
Na izany aza, ambany dia ambany ny latency amin'ity rindrambaiko ity. Na izany aza, safidy mety tsara ho an'ireo olona manao streaming audio sy horonan-tsary betsaka izany. Ny fanamorana ny fidirana sy ny fanaraha-maso lavitra dia iray amin'ireo endri-javatra tsara indrindra amin'ity vahaolana rindrambaiko ity. Ambonin'izany, maimaim-poana izany raha ampiasainao ho an'ny mpampiasa tokan-tena. Splashtop dia mandoa $ 60 isan-taona.
Raha mila safidy hafa amin'ny TeamViewer ianao amin'ny fiatrehana tanjona voalohany toy ny fanatsarana ny fizarana sy ny fisian'ny loharano nefa tsy manimba ny filaminana, dia tsy maintsy mandeha amin'ity fampiharana ity ianao.
Fitaovana LogMeIn Pro no mpizara rahona tsara indrindra izay mamaly mazava tsara izay ilainao. Izy io dia miaraka amin'ny habaka 1TB, hahafahanao mahazo antoka fa hitahiry ireo rakitrao sy rindranasao rehetra eto. Afaka miditra haingana amin'ireo rakitra avy amin'ny tahiry koa ny ekipanao raha ilaina izany.
Ambonin'izany dia afaka manonta an-tsoratra lavitra ny antontan-taratasiny amin'ny mpanonta an-toerana ny olona iray, miara-miasa mora foana amin'ireo rakitra manokana, ary mandeha ho azy ny lahasa IT, miaraka amin'ireo fiasa mahavariana hafa.
Tombontsoa iray hafa amin'ny fidirana amin'ny LogMeIn Pro dia ny fananany fiarovana avo, izay mety tsy hitanao ao amin'ny TeamViewer. Ny sésianao dia azo antoka amin'ny alàlan'ny enkripsi AES 256-bi sy ny fitaterana TLS 1.2. Ankoatr'izany, ny mpizara dia fantatra ihany koa miaraka amin'ny fanampian'ny Public Key Infrastructure.
5. Desktop Remote Chrome
Araka ny noresahantsika tao amin'ny fizarana intro, ny iray amin'ireo olana lehibe amin'ny fampiasana ny TeamViewer dia ny fahasarotany. Fa ankehitriny manana ny safidy hafa lafatra ianao amin'ny endrika Chrome Remote Desktop. Ity vahaolana lozisialy ity dia mahitsy ampiasaina. Ny hany ilainao dia ny manokatra Google Chrome amin'ny solosainao lavitra. Afaka manomboka mifehy sy manara-maso avy hatrany ireo fitaovana latsaka ao amin'ireo faritra misy ny tamba-jotra ianao.
Raha manahy momba ny hafainganam-pandehan'ny rafitra fiasa ianao dia mahagaga. Tsy misy fiatraikany amin'ny hafainganan'ny fiasan'ny chrome. Ity fitaovana ity dia miaraka amin'ny vidiny ary manome anao fampiasa fohy. Tsy hahita fampiasa sasantsasany toa ny antso an-tsary ianao, tsy miresaka, ary fizarana efijery izay anananao ao Mikogo. Na izany aza, tsara kokoa ny miditra amin'ireo fitaovana lavitra.
6. Fivoriana Webex
Eny, Webex Meetings no tena fanoloana ny TeamViewer satria izy io koa no fitaovana fampiresahana tranonkala tsara indrindra. Ity dia rindranasa mifototra amin'ny rahona izay miparitaka amin'ireo mpizara rahona samihafa an'ny Cisco misy fantsom-pifandraisana voafetra. Ankoatr'izay, ity rindrambaiko ity dia misy koa ny konsep caching sy ny back-up, izay mahatonga ity fitaovana ity ho tsara ho an'ny ekipa voaroaka sy lehibe izay maniry ny hanana faran'izay betsaka.
Na izany aza, ny fonosana premium an'ny Webex dia mamela anao hametraka fihaonambe web miaraka amin'ny vahiny 100. Azonao atao ny manavaka ny mombamomba ny mpampiasa, mizara fizarana amin'ny alalàn'izy ireo manokana.
Ankoatr'izay dia hanana fiarovana tenimiafina koa ianao ary hiditra mora foana amin'ireo fitaovana lavitra, ary hiaraka amin'ny fomba fijery Microsoft. Saingy ity fampiharana ity dia mamela anao hifampidinika amina mpampiasa roa fotsiny isaky ny mandeha amin'ny kinova maimaimpoana. Noho izany, azonao atao ny mieritreritra ny mandoa ny vola feno hidirana amin'ireo fitaovana ao aminy.
Ny farany tsy latsa-danja ao amin'ilay lisitra dia REALVNC Connect. Izy io dia iray amin'ireo safidy tsara indrindra ho an'ny TeamViewer amin'ny resaka session sy fiarovana amin'ny REALVNC. Izy io dia manolotra fiarovana sy teny miafina tenimiafina.Izy io dia manasongadina ny fidirana amin'ny rindranasan'ny mpijery avy amin'ny solosainao sy ny fampiharana mpizara napetraka ao amin'ny solosainao izay fehezinao.
Ny zavatra tsara indrindra momba an'ity rindrambaiko ity dia tsy mitaky fikirakirana router sy rindrina manokana hahitana azy.Ambonin'izany dia misy amin'ny safidy roa karama sy maimaim-poana. Raha te hiditra amin'ny fitaovana bebe kokoa ianao dia mila mandoa vidiny kely manodidina ny $ 55. Ankoatr'izay, ianao koa dia hahazo endri-javatra mahazatra toy ny chat sy ny famindrana data.
Noho izany, izao dia manana ny sasany amin'ireo safidy tsara indrindra an'ny TeamViewer azonao apetraka amin'ny solo-sainanao hananganana fifandraisana lavitra miaraka amin'ny PC iray hafa amin'ny faritra lavitra. Ireto solony ireto dia mahafeno ny fepetra takinao rehetra hidirana amin'ny solosaina lavitra.
Amboary ny lesoka Microsoft Minecraft Remoteconnect
Chicken Run 2: Misy datin'ny famoahana sy tsaho ve?
kaody maimaim-poana ho an'ny xbox mivantana
kaody mivantana xbox mivantana 2015
ny fomba ahazoana itunes amin'ny solosaina findaiko
mijery sarimihetsika hd maimaim-poana amin'ny Internet
amazona prime sy kaonty edu
ny fomba ahazoana robux be dia be
mampifandray chromecast amin'ny solosaina finday amin'ny tele